Taariikhda Shirkadda - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
"Shiinaha waxay sii wadi doontaa inay ka taageerto shirkadaha ka socda waddamada oo dhan sahminta fursadaha ganacsi ee Shiinaha iyada oo loo marayo barnaamijyo furan sida Expo," ayuu yiri Madaxweyne Xi Jinping. Shiinuhu wuxuu taabanayaa awoodda kobaca ee ganacsiga caalamiga ah wuxuuna si wanaagsan uga qayb qaadan doonaa kobaca ganacsiga caalamiga ah iyo horumarinta dhaqaalaha adduunka. Shiinaha wuxuu dardargelin doonaa horumarinta qaabab ganacsi iyo moodello cusub, sida ganacsiga xuduudaha isaga gudba, si loo kobciyo wadayaasha cusub ee ganacsiga shisheeye.
Magaalada Anqiu ee Gobolka Shandong waxay si adag u fulineysaa go'aamada iyo qabanqaabada Golaha Dhexe ee Xisbiga iyo Golaha Gobolka, waxay hagaajineysaa oo dejineysaa siyaasadaha iyo tallaabooyinka ganacsiga caalamiga ah, waxay horay u riixaysaa "shanta rajo" iyo "saddex dhisme", waxay kobcisaa qaabab cusub iyo moodello shisheeye ganacsiga, oo si joogto ah kor ugu qaadaya horumarka tayada sare leh ee ganacsiga dhoofinta. Marka laga hadlayo hoos u dhaca ku yimid ganacsiga adduunka, ganacsiga shisheeye ee Shiinaha ayaa kor u qaaday isbeddellada wuxuuna gaadhay heer sare oo xagga koritaanka ah. Waxaan ka gaarnay horumar cusub xaqiijinta xasilloonida iyo kor u qaadista tayada ganacsiga shisheeye ee Shiinaha.
Asalka siyaasadan, Kooxda Horumarinta Beeraha ee Anqiu, oo ah shirkad ganacsi oo ay dowladu leedahay, iyo China Rural Innovation Port Co., Ltd. ayaa si wada jir ah u aas aasay Nongchuanggang Cross Border E-commerce (Weifang) Co. Ltd, oo loo yaqaan NCG. Mashruuc muhiim ah ee Magaalada Anqiu sanadkaan, NCG ma aha oo kaliya mashruuc muhiim ah oo lagu taageerayo wax soo saarka beeraha maxalliga ah, laakiin sidoo kale waxay sare u qaadeysaa horumarka dhaqaalaha iyo horumarka ballaaran ee Magaalada Anqiu. Maaddaama ay tahay suuq ballaaran oo wax soo saarka beeraha, Anqiu kuma koobna oo keliya basasha cagaaran oo tayo sare leh, sanjabiil, laakiin sidoo kale khudaar noocyo badan leh. Barxadda e-ganacsiga e-commerce ee xudduudaha ka gudubta ee Dekedda Innovation Beeraha waxaa si gaar ah loogu dhisay barxadda dhoofinta ee basasha cagaaran, sinjibiil iyo khudradda, kuwaas oo ah waxyaabaha ka soo baxa Magaalada Anqiu.
Tan iyo markii la aasaasay bilawgii Janaayo 2021, oo ka mid ahaa ganacsiyada dhoofinta beeraha ee 148 ee Anqiu, hadda waxaa jira 20 ka mid ah oo ku soo biiray barxadda. Nooca Shiinaha ee loogu talagalay barnaamijku wuxuu ahaa khadka tooska ah Janaayo 7th, nooca Ingiriiskuna wuxuu ahaa khadka tooska ah Janaayo 17th. Inta udhaxeysa Janaayo 17 iyo Janaayo 26 waxaa jira booqashooyin kor u dhaafaya 40000, oo helaya heshiisyo 4 wadar ah, oo laga qoondeeyay Koonfurta Kuuriya, Boqortooyada Ingiriiska, iyo New Zealand, wadar ahaan wadarta $ 678628. Amarada ka imanaya Faransiiska, Australia, iyo Ruushka ayaa gorgortan ku jira.